Rypple: Jawaab celin, Tababar iyo Aqoonsi | Martech Zone
Rypple: Jawaab celin, Tababar iyo Aqoonsi
Talaado, July 10, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan u gudubnay shaqada Yammer usbuucyadii la soo dhaafay runtiina si fiican ayey u shaqeyneysaa. Xitaa maanta, Marty wuxuu joogaa xafiiska, Stephen habeenkii oo dhan ayuu ka shaqeynayay guriga, aniga waxaan joogaa Ball Ball, Nikhil wuxuu joogaa Hindiya Jenn wuxuu ka shaqeynayaa guriga. Si midba midka kale la ogeysiiyo, waxaan cusbooneysiineynay Yammer si aan midba midka kale ula socono meesha aan joogno, waxa aan ka shaqeyno, iyo waxa aan ugu baahan nahay caawimaad. Waa qalab isgaarsiineed bulsheed oo weyn oo ka dhex jira ururkeenna.
Kawaran hadaad wada hadaladaas qaadan karto oo aad kudari lahayd hadaf yool, tababarid, aqoonsi iyo jawaab celin, in kastoo? Taasi waa waxa Rypple rajeynayo inuu ku guuleysto waxqabadka bulshada madal. Dhamaan khibradaha isticmaale ee aad ugu eg Facebook, markaa way fududahay in sidoo kale la isticmaalo. Rypple aad buu ii xasuusiyaa Yammer, laakiin leh astaamo dheeri ah oo ku saabsan dhismaha kooxda iyo aqoonsiga.
Goobta shaqada ee maanta waxay u baahan tahay qaab cusub oo loo maareeyo waxqabadka. Rypple waa maareyn maareynta waxqabadka bulshada ee ku saleysan websaydhka oo ka caawisa shirkadaha inay hagaajiyaan waxqabadka iyada oo loo marayo yoolalka bulshada, jawaab celin joogto ah iyo aqoonsi macno leh.
Kawaran haddii aad markaa ka dib ku dhex dari lahayd shaqadaada, himilooyinkaaga iyo jawaab celintaada si toos ah CRM-kaaga? Waad awoodi kartaa tan iyo markii Salesforce ay iibsadeen Rypple dib bishii Febraayo. Rypple wuxuu si buuxda u dhexgalaa Iibka (iyo Wadahadalka). Sidoo kale waa diyaar-mobile.
Go'aaminta Facebook iyo Twitter ROI